DAAWO: M/weyne caan ah oo saaka tagay Muqdisho & PTIMES oo heshay Ujeedada socdaalkiisa.
MUQDISHO(P-TIMES) – Wakaalada Wararka ee PuntlandTimes waxay ogaatay in uu saaka caasumada Soomaaliya ee Muqdisho, tagaya Madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabu Mbeki oo ay wehliyaan xubno badan oo katirsan dalkiisa, shalayna waxay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ujeedada socdaalka Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ku tagayaan Soomaaliya, waxaa lagu sheegay in ay kala hadlayaan Madaxda dawladda Soomaaliya arrimaha la xariira Isbedelada ka socda gobalka Geeska Afrika, Ammaanka, is dhexgalka bulshada iyo xariirka diblumaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya.
Xogtu waxay sheegaysaa in Madaxweyne Mbeki uu dadaal badan galin doono sidii labada dal ay u gaari lahaayeen is faham wanaagsan, loona dhameyn lahaa xurgufta siyaasadeed ee u dhaxeysa, balse ma cada ilaa hadda waxay wadaan.
Mr, Thabu wuxuu shalay kula kulmay magaalada Nairobi Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata iyo wasiirka Arrimaha dibada oo ay ka wadahadleen xaaladdaha gobalka, shaki maleh in arrimaha laga hadlay ay ku jiraan kuwa Soomaalida.
HALKAN KA DAAWO ARRIMAHA BADDA
Kenya waxay dadaal badan galinaysaa in dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya & Kenya lagu dhameeyo miiska wada xaajoodyada lagana soo celiyo Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo dacwadan u fariisan doonto bisha September ee sannadkan.